Grantorrent ပိတ်လိုက်: စီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Jesus Sanchez | | အင်တာနက်ကို
ဟုတ်ပါတယ်, Grantorrent ပိတ်လိုက်သည် မည်သို့ပင်ကခဏဖြစ်ခဲ့သည် သင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး torrent download sites များထဲမှတစ်ခု ရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးကိုရှာပါ နှင့်စီးရီး ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများမှမရှိတော့သုံးစွဲနိုင်သည်။ သို့သော်အားလုံးသည်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိသေးပါ၊ ယနေ့ Grantorrent အတွက်အခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိနေသည်။ ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများကိုအောက်တွင်ကြည့်ရှုကြပါစို့ စီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်တရားဝင်ဆိုဒ်များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
1 Grantorrent ပိတ်လိုက်တယ်
2 Grantorrent ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ
2.3 pluto တီဗီ
2.4 အင်တာနက် Archieve
2.10 YouTube ကို
Grantorrent သည်ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးအမြောက်အများကို download လုပ်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်မှာကြာပြီ။ ၎င်းသည်သင်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်များစွာသောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်အကြိုက်ဆုံးဆိုဒ်များတစ်ခုဖြစ်သည် ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးတွေအကြားရွေးချယ်ပါ (အခြားသူများအကြား 3D, HD, 4K, BluRay သို့မဟုတ် Micro HD ရှိရုပ်ရှင်များ)
သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ပိတ်ခဲ့သနည်း ကောင်းပြီ, အကြောင်းပြချက်ရှင်းပါတယ် သင်သည်မူပိုင်ခွင့်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာဒေါင်းလုပ်စာမျက်နှာအမျိုးအစားများတွင်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်တရား ၀ င်မဟုတ်သောကြောင့်အလွန်အမင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများခံရသည်။
Grantorrent ၏အကောင်းဆုံး torrent download sites တစ်ခုအနေဖြင့်အောင်မြင်မှုသည်ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေခဲ့သည်၊ သို့သော်ယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်သည် များစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် သူတို့ကအတူတူပင်ပို။ ပင်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုဆက်ကပ်။ ထို့ကြောင့်ဤပလက်ဖောင်းများကိုအသုံးပြုသူများသည် multimedia content ကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်သည် တက်ကြွ။
Gnula သည် Grantorrent အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ရှာနိုင်သည် အကောင်းဆုံး Premieres ယခုအချိန်တွင် ၀ က်ဘ်သည်နေ့စဉ်မွမ်းမံမှုများလက်ခံရရှိသည် အကောင်းဆုံးအသံနှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေး သင့်ရဲ့ catalog ထဲမှာ။ ဘာသာစကားများအတွက် dubbing options ကိုသင်ရှာနိုင်သည် Latinoနှင့် စာတန်းထိုး အင်္ဂလိပ် သို့မဟုတ် español.
ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများကိုစည်းရုံးခြင်းအမျိုးအစားများ၊ Premieres များ၊ အကြံပြုထားသည့်အသစ်များ၊ အရည်အသွေးအသစ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စီးရီးများ၏အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်ကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်သင်လိုချင်သောရုပ်ရှင်အားစကားလုံးများဖြင့်စစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်လည်းရှာဖွေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ဇာတ်လမ်းများ၊ ဟာသများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ သတိပြုသင့်သည်မှာဤစာမျက်နှာများသည်အကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက် ဒါကြောင့်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာမင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုသဘောတူတယ်။
EliteTorrent သည် Gnula နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည်လက်တွေ့အားဖြင့်အတူတူပင်ကမ်းလှမ်းသည်၊ ၎င်း၏ကက်တလောက်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးမတူညီသောကြောင့်၎င်းကိုတင်ပြသည် Grantorrent ဖို့အကောင်းဆုံးအခြားနည်းလမ်းများထဲမှ။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသင်ဟာကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုကိုတွေ့လိမ့်မည် movies y စီးရီးနောက်ဆုံးပေါ်အခန်းကြီးများနှင့်ချက်ချင်းပင်ပြသမည်။ ထို့အပြင်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်များကအကြောင်းအရာများကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စီးရီးများကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းတို့ကို EliteTorrent တွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။
ဝဘ်ဆိုက်တွင်အဓိကစာမျက်နှာတွင်နောက်ဆုံးထုတ်များ၊ စပိန်ဘာသာနှင့်မူရင်းဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသူများသို့မဟုတ်လက်တင်ဘာသာစကားဖြင့်ထုတ်ဝေသူများအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသောခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ စာမျက်နှာ၏ထိပ်တွင်သင်အလွယ်တကူရှာဖွေနေသောအရာကိုရှာဖွေရန်ကျားမရေးရာဖြင့်စစ်နိုင်သည်။
သင်မေးမြန်းလိုသောရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စီးရီးကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ အသုံးပြုသူများ၏မဲအရေအတွက်အရရုပ်ရှင်ကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သောပျမ်းမျှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ Gnula ၌ရှိသကဲ့သို့ EliteTorrent သည်မူပိုင်ခွင့်ကိုမကြာခဏချိုးဖောက်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်အားဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းအရာ၏မူပိုင်ကိုချိုးဖောက်လိမ့်မည်။
ပလူတိုတီဗီသည် ပလက်ဖောင်းအသစ် streaming များ စပိန်အတွက်အခမဲ့ သီးသန့်အွန်လိုင်းရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း ၄၀ ကျော်နှင့်ရာနှင့်ချီသောပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပွင့်လင်းသောအကြောင်းအရာပါသည့်ပလူတိုတီဗားရှင်းအကြောင်းလေ့လာပါ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲအခမဲ့ဖြစ်သည်။ စပိန်တွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
Pluto TV သည်အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်း ၄၀ ကျော်ကိုထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏အစီအစဉ်များတွင်ကြော်ငြာခြင်းပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လာမည့်ပို့စ်တွင်ပလက်ဖောင်းကိုမည်သို့မည်ပုံအသုံးပြုရမည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည်နှင့်စပိန်နိုင်ငံရှိ၎င်း၏ကတ်တလောက်တွင်မည်သည်ကိုတွေ့ရမည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
Pluto တီဗွီကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများမှတဆင့် Apple TV၊ Android TV၊ Movistar +၊ Amazon မီးတီဗွီ၊ Chromecas, Roku, Samsung TV Plus နှင့် PlayStation Network။ ဤပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်၎င်းကို၎င်း၏လျှောက်လွှာမှရယူရမည်။ သင်၏ App ကို Android နှင့် iOS စမတ်ဖုန်းများတွင်လည်း download လုပ်နိုင်သည်။
Pluto TV အကြောင်းသင်သိချင်ရင်မင်းကိုထားခဲ့ပါ ပို့စ်တင်မယ် ဒီပလက်ဖောင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြမယ် streaming များ အခမဲ့ကြောင်းမကြာသေးမီကစပိန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်၊ ရုပ်ရှင်၊ စီးရီး၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်အခြားသူများရှိနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အကြောင်းအရာအားလုံးမှဖြစ်သည် အများသုံးဒိုမိန်း။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောအင်တာနက် Archieve တွင်ပါသောရုပ်ရှင်များသည်၎င်းတို့၏ဖန်တီးသူများ၊ သူတို့၏အခွင့်အရေးများပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဒီ site ဟာအလိုလိုသိပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးမျိုးသောစစ်ထုတ်စက်များ (နှစ်၊ ဘာသာစကား၊ နိုင်ငံများ၊ ဒါရိုက်တာများ) ကစီစဉ်တယ်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် (သို့) browser တွင်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
ဒီဆိုဒ်တွင်နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုမမျှော်လင့်ပါ၊ ဤနေရာတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်မသက်ဆိုင်သောရုပ်ရှင်အဟောင်းများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်သည်မူပိုင်ခွင့်မပါဘဲအကြောင်းအရာများကိုမျိုးပွားသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ ဤနေရာသည်သင်၏နေရာဖြစ်သည်။
၎င်းသည် YouTube သို့မဟုတ် Internet Archive ကဲ့သို့သောအခြားဆိုက်များတွင်တင်ထားသောရုပ်ရှင်များစွာကိုသင်တွေ့ရမည့်နေရာဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းယဉ်ကျေးမှုတွင်ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်ရုပ်ရှင်များကိုတပ်ဆင်ထားသောရုပ်ရှင်များမရှိပါ၊ ၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာစာရင်းကိုပေးသည်။
အခမဲ့ရုပ်ရှင် ၁,၁၅၀ အထိအွန်လိုင်းတွင်သင်ရှာနိုင်သည်။ ဂန္ထဝင်၊ အင်ဒီ၊ ရုပ်ရှင်အဆွေတော်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်အခြားရုပ်ရှင်များပါဝင်သည်။ စုဆောင်းမှုကိုအောက်ပါအမျိုးအစားများဖြင့်ခွဲခြားထားသည် - ဟာသနှင့်ပြဇာတ်၊ Noir, ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့် Hitchcock; အနောက်တိုင်းသားများ၊ ကိုယ်ခံပညာရုပ်ရှင်များ; အသံတိတ်ရုပ်ရှင်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ကာတွန်း။
ယခင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုနှင့်မတူသည်မှာဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည် အများသုံးဒိုမိန်းရုပ်ရှင်နှင့်စပိန်စာတန်းထိုးများ။ ပွင့်လင်းယဉ်ကျေးမှုတွင်ကဲ့သို့, ဆိုဒ်တွင်မည်သည့်ရုပ်ရှင်များကိုမျှပြသထားခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အား YouTube ဗီဒီယိုများထည့်သွင်းထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စပိန်စာတန်းထိုးပါသည့်စစ်မှန်သောရုပ်ရှင်ဂန္ထဝင်များကိုကြည့်လိုပါကသင်၏နေရာဖြစ်သည်။
PopcornFlix သည်အခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည် streaming များ ကပိုင်ဆိုင်ရုပ်ရှင်၏ မျက်နှာပြင်မီဒီယာ Ventures။ ၎င်းသည်များစွာသောအများဆိုင်ဒိုမိန်းရုပ်ရှင်များနှင့်မူရင်းအကြောင်းအရာများကိုပေးထားသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုကျော်ဖြန့်ဝေထောင်ပေါင်းများစွာအခမဲ့ရုပ်ရှင်ပါဝင်သည် (ဒရာမာ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၊ လှုပ်ရှားမှု၊ ဟာသ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်စသည်တို့) ။ တီဗီရှိုးများနှင့် National Geographic စီးရီးများစာရင်းကိုလည်းကြည့်နိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာရုပ်ရှင်တိုတွေ၊ ကာတွန်းတွေ၊ မတ်တပ်ရပ်ပြီးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အမြောက်အများကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပြproblemနာတစ်ခုတည်းမှာမူမူလဗားရှင်း (အင်္ဂလိပ်) တွင်အများဆုံးဖြစ်သောဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာအဖွဲ့အစည်းကအရမ်းထိုးထွင်းသိမြင်သည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ ရုပ်ရှင်ကားများ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ ကာတွန်းကားများ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ၊
ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ရုံကိုနှစ်သက်သူများအတွက်၊ ဒီဆိုဒ်ဟာသင့်စာရင်းထဲမှာမပါ ၀ င်သင့်ဘူး။ ဒီမှာသင်လုပ်နိုင်တယ် ရုပ်ရှင်ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ။ အမျိုးအစားအလိုက်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းကသင့်စိတ်ကြိုက်ကိုက်ညီမည့်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်စာမျက်နှာပေါ်ရှိရုပ်ရှင်အသစ်များနှင့်အသုံးပြုသူများကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းအရာများကိုလည်းသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
YouTube သည်အများပြည်သူဆိုင်ရာအခမဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အမြောက်အများကိုပေးသည် တီဗွီအစီအစဉ်များလည်းသူတို့အတွက်တစ်ပြားတစ်ချပ်မပေးဘဲပျော်မွေ့နိုင်သည်။ သင်သိသောရုပ်ရှင်ကိုအများပြည်သူဒိုမိန်းတွင်ရှာဖွေရန်လိုသည်။ သင်အလျင်အမြန်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤအမျိုးအစားကိုတင်ပို့ရန်ရည်ရွယ်ထားသောလမ်းကြောင်းများလည်းရှိသည်။
၎င်းသည် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ဂန္ထဝင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင် ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့် YouTube ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤရုပ်ရှင်အမျိုးအစားများကိုနှစ်သက်သူဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင်မလွတ်သင့်သော YouTube channel ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ထုတ်လွှင့်သောထင်ရှားသောအမှုတော်များတွင်ရေတွင်းသို့မ ၀ င်သောကျည်ဆံသို့ ၀ င်ရောက်သည့်နေ့ A ဝက်ပါ ၀ င်သည်။ ရုပ်ရှင်အားလုံးနှင့်အတူပါလာသည် အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး.
Vimeo မှာအခမဲ့ရုပ်ရှင်ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ ဤတွင်သင်ပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ် အွန်လိုင်းလွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။ သင်၏ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ရုပ်ရှင်တိုတိုများစွာရှိသည်။
Kanopy သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစာကြည့်တိုက်များ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် လက်တွဲ၍ အကြောင်းအရာများစွာကိုအခမဲ့စုဆောင်းနိုင်သည်။ ဒီ streaming ဝန်ဆောင်မှု သင်၏စာကြည့်တိုက်ကဒ်ပြားနှင့်အတူရုပ်ရှင်ကားပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဤကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောတက္ကသိုလ်များနှင့်အများပြည်သူစာကြည့်တိုက်များ၏ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာများမှသင်အားယူနိုင်သည်။ ၄၀၀၀ ကျော်သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ။
ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ? သင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင့်ဒေသဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်ကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်သင်၏ကဒ်နံပါတ်ကိုထည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကမင်းရဲ့စွန့်ပစ်မှုမှာရှိတယ်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း Grantorrent မှအခြားရွေးချယ်စရာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကရှိပါတယ်၎င်းတို့သည်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တရားဝင်အကြောင်းအရာများကိုလုံးဝတရားဝင်ဖြစ်စေသည့်ဆိုဒ်များဟုတ်မဟုတ်။ ဤဆိုဒ်များကိုသင်အသုံးပြုမှုသည်သင်၏တာ ၀ န်ခံမှုအောက်တွင်ရှိသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » Grantorrent ပိတ်လိုက်: စီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ
yourphone.exe ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း။